China POF mangarahara matevina azo ovaina POF mampihena ny horonantsary Jumbo roll factory sy mpanamboatra | GS PACK
Hafa mamolavola horonantsary POF miharihary POF mihodina ny horonan-tsary Jumbo horonan-taratasy
Ny PVC SHRINK FILM (Polyvinyl Chloride) no karazana filma mihena indrindra eto an-tsena ankehitriny. Ny fanontana horonantsary pvc shrink film dia karazana fonosana ara-toekarena misy kalitao tsara izay be mpampiasa amin'ny karazana indostrian'ny fonosana, toy ny sakafo, zava-pisotro ary fampiasana isan'andro.
Ny pvc dia horonantsary avo lenta izay mihena amin'ny laharan'ny maripana ambany. Ny akora vita amin'ny tanana faran'izay tsotra ampiasaina amin'ny tsena. Izy io dia manana taham-pahakiviana tena tsara, mazava, kalitaon'ny pirinty, ary karazana maripana mihena roa ary mihena ny refy. hery mahery vaika amin'ny fanoherana ny toetr'andro fanampiny. Ity akora vita amin'ny tànana mahatohitra scuff ity dia manana ny vidiny ambany indrindra.
Hateviny (à / hijerena)
Polyolefin Shrink Film (POF) no fitaovana fampihenana be mpampiasa indrindra, Ny singa lehibe indrindra amin'ny sarimihetsika dia ny Polypropylene (PP) sy ny Linear Low DensityPolyethylene (LLDPE).
Ireo fitaovana ireo dia tsy misy poizina sy tsy misy fofona Tontolo iainana namana (POF) 5-Layer Co-extruded Polyolefin Shrink Film novokarin'ny orinasanay dia asongadin'ny fihenan-danja avo lenta (mihoatra ny 60%), fananana sakana amin'ny rivotra antonony, faharetana malefaka ary hermetika. famehezana fananana, fanoherana ny maripana ambany, tsy marokoroko, mando-porofo ary anti-statika. Mety amin'ny milina fonosana mandeha ho azy na semi-automatique izany.
Ny tena mampiavaka ny sarimihetsika fonosana POF:
1. Taham-pikatsoana: 20% - 30% ny halavany, 65% ny halavany - 75%.
2. Avo glossy, mangarahara avo, fampisehoana haingo Perfact.
3. Ny fampisehoana miovaova dia tsara, manatsara eo ambany temprature ambany, tsy mora mihantitra.
4. Ny ambany hakitroky ny Film POF Shrink afaka mampihena ny vidin'ny fonosana.
5. Fahombiazana amin'ny famehezana hafanana dia miavaka, famehezana avo roa ambin'ny folo.
6. Tensile, fanoherana fampisehoana tsara ny puncture.
7. Ampiasao ny elanelam-potoana, afaka ampiasaina amin'ny fitaovana fonosana semi-mandeha ho azy, mandeha ho azy haingam-pandeha ary fonosana tanana.
Previous: Sarimihetsika plastika 10-35 mikrônaly mirindra amin'ny paompy thermo shrink fonosana
Pof hafanana hampihemotra ny horonan-tsary
Horonantsary mihena hafanana Polyolefin
Mihena horonan-tsary horonan-tsary, Mitete Film Pvc, Temperature famonosana polyolefin, Sarimihetsika Polyolefin Pof Shrink, Famonosana Polyolefin Pof Shrink, Horonan-tsarimihetsika Vs Shrink Wrap,